I-loft ethokomele e-county cottage - I-Airbnb
I-loft ethokomele e-county cottage
Mendon, Utah, i-United States
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Linda
Ikhaya elincane endaweni enhle yedolobha elincane, cishe imizuzu eyi-15 ukuya endaweni yedolobha elikhulu. Kufinyeleleka ekuhambeni izintaba - imizuzu emi-5, ukuhamba ngesikebhe. kanye nemisebenzi yokushushuluza eqhweni imizuzu engama-45-60 futhi i-Utah State University iqhele ngemizuzu engama-20.
Leli yindlwana encane endaweni yasemakhaya enemizila yezintaba eduze. I-loft ivuleke ngokwengxenye kodwa ivalwa ngokuhlukanisa. Ikhishi, iwasha nokomisa kuyatholakala. Ikati lami kanye nami yithi sodwa esihlala lapha ngakho ngezinye izikhathi uyoba nawe. Usilingi ovalekile unikeza indawo encane umuzwa omkhulu.
Indlu isendaweni eyi-half acre. Nginomakhelwane abahle futhi kukhona izinyamazane ezimbili ezifuywayo endaweni ehlangene ngemuva kwendlu. Mahle futhi athule. Le ndawo inomuzwa we-hamlet encane enhle ezweni.
Ungangithola kokuthi (PHONE NUMBER HIDDEN) noma i-imeyili yami (IMEYILI EFIHLILE) noma nge-Airbnb.